သင့်ချစ်သူရဲ့ ပါးစပ်က ဒီစကား (၅)ခွန်း ထွက်ဖူးခဲ့ရင် ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ -
လူတော်တော် များများက အပြောထက် အလုပ်က အဓိက ကျတယ်လို့ ခံယူကြပေမယ့် အပြောကနေတစ်ဆင့် လုပ်လာမယ့် အရာတွေကို သိနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အဆင့်အတန်း၊ အမူအကျင့်၊ စိတ်နေစိတ်ထား တွေကို သူပြောတဲ့ စကားတွေကနေ တဆင့် သိလို့ ရပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ချစ်သူဆီက ဒီစကား (၅)ခွန်း ဒါမှမဟုတ် ဒီအထဲက တစ်ခွန်းကိုပဲ ကြားဖူးတယ် ဆိုရင် ဘယ်လောက် ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက် ပါတော့။ ဘယ်လိုမှ လူကောင်း မဖြစ်နိုင် လို့ပါ။
(၁) အပိုတွေ လုပ်ပြန်ပြီ
ယောက်ျား တယောက်၊ ချစ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့သင့်ရဲ့ ခံစားချက်ကို ဒီလို မစော်ကားသင့် ပါဘူး။ သင်ဟာ ရက်တွေဆက်ပြီး စိတ်ဖိစီးနေတာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ သူ့ဖက်က ကြည့်လို့ အသေးအမွှားလို့ ထင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေတောင် သင့်အနေနဲ့ကြည့်ရင် အရမ်းပင်ပန်းကောင်း ပင်ပန်းနေမယ်။
သင့်ဘာသာသင် အပိုတွေလုပ်နေတာပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သင့်ချစ်သူတစ်ယောက် အနေနဲ့သင့်ကို နှစ်သိမ့်ပေးရမှာ သူ့တာဝန်ပါ။
ဒီလိုမဟုတ်ဘဲ အပိုတွေလုပ်နေပြန်ပြီ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်တဲ့ စကားကို ပြောတယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက် ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ သင့်အပေါ်မှာ နည်းနည်းလေးမှ ညှာတာ၊ သနားစိတ်မရှိတဲ့သူကို အချိန်ကုန်ခံ ဆက်တွဲ မနေသင့် တော့ပါဘူး။
(၂) နင်ငါ့ကို တကယ်ချစ်ရင်
ဒီလိုစကားဟာ အစပိုင်းမှာတော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူး လို့ ထင်ရပေမယ့် သင့်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကနေ နှိပ်စက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နင်ငါ့ကို တကယ်ချစ်ရင် ငါနဲ့ အိပ်ပေးရမယ်၊ ဒါဝယ်ပေး ရမယ်၊ ဒါလုပ်ပေးရမယ် အစရှိသဖြင့် ချစ်တာကို ခုတုံးလုပ်ပြီး သင့်ကို ခိုင်းစေတတ်တဲ့သူ ဆိုရင်တော့ ဘယ်လောက်ချစ်ချစ် လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ သင့်ကို တကယ်ချစ်တာ မဟုတ်သလို၊ သစ္စာရှိမယ့် သူမျိုးလည်း မဟုတ်လို့ပါ။
(၃) ရည်းစားဟောင်းနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အခြား မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာဟာ လုံးဝ မလုပ်သင့်တဲ့ လုပ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာကတော့ သူ့အရင် ရည်းစားနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ပြောခြင်းပါပဲ။ ဒါဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညှင်းပန်း နှိပ်စက်တတ်တဲ့ ယောက်ျားဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနေသလို၊ သင့်ကို နာကျင်စေမယ်မှန်း သိရက်နဲ့ တမင်လုပ်တတ်တဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလိုလူမျိုးကို လမ်းခွဲ လိုက်တာ အကောင်းဆုံး ပါပဲ။
(၄) မင်းအမေနဲ့ တချိုးတည်းပဲ
သင့်မိခင်ဟာ သင့်ကို ဒီအရွယ်ထိရောက်အောင် ကျွေးမွေးပြုစုလာ ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမေမဟုတ်ရင်တောင် သင့်ကို လူလားမြောက်အောင် ကျွေးမွေးပြုစုခဲ့ တဲ့သူ တစ်ယောက် ယောက်နဲ့ ဒီလိုမျိုး အဆိုးဖက်ကနေ နှိုင်းပြီး ပြောတတ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုးဟာ စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ညံ့ဖျင်းသေးသိမ်တဲ့ သူပါ။
သင့်ရဲ့မိသားစုကို မကြည်ဖြူတဲ့ ယောက်ျားမျိုးကို ဘယ်လောက် ချစ်ချစ် လမ်းခွဲ လိုက်ပါ။ သူကြောင့် သင်အမြဲ နာကျင်နေရမှာ မို့ပါ။
(၅) ဘာလို့ ဒီလောက် ဦးနှောက် မရှိရတာလဲ
သင်ဟာ အမှားတွေ ခဏခဏ လုပ်မိတတ်တယ် ဆိုရင်တောင်မှ သင်ချစ်တဲ့သူဆီ ကနေ အရူး၊ ဦးနှောက် မရှိဘူး၊ အသုံးမကျဘူး ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ထွက်မလာသင့် ပါဘူး။ သင်အမှားလုပ်မိတဲ့ အခါတွေမှာ သင့်ကို သိမ်ငယ်သွားအောင်၊ စိတ်ကျဉ်းကျပ် သွားအောင်၊ ထူပူသွားအောင် ပြောဆိုတတ်တဲ့ယောက်ျားဟာ အောက်တန်းကျတဲ့ ယောက်ျားမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကို တန်ဖိုးမထားမှန်းလည်း အရမ်းသိသာနေ တာကြောင့် အဲလိုလူမျိုးကို လမ်းခွဲလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ မဟုတ်ရင် သင့်တစ်ဘဝလုံး မျက်နှာငယ်နေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သငျ့ခဈြသူရဲ့ ပါးစပျက ဒီစကား (၅)ခှနျး ထှကျဖူးခဲ့ရငျ ဘယျလောကျခဈြခဈြ လမျးခှဲလိုကျပါ
လူတျောတျော မြားမြားက အပွောထကျ အလုပျက အဓိက ကတြယျလို့ ခံယူကွပမေယျ့ အပွောကနတေဈဆငျ့ လုပျလာမယျ့ အရာတှကေို သိနိုငျပါတယျ။ လူတဈယောကျရဲ့ အဆငျ့အတနျး၊ အမူအကငျြ့၊ စိတျနစေိတျထား တှကေို သူပွောတဲ့ စကားတှကေနေ တဆငျ့ သိလို့ ရပါတယျ။
တကယျလို့ သငျ့ခဈြသူဆီက ဒီစကား (၅)ခှနျး ဒါမှမဟုတျ ဒီအထဲက တဈခှနျးကိုပဲ ကွားဖူးတယျ ဆိုရငျ ဘယျလောကျ ခဈြခဈြ လမျးခှဲလိုကျ ပါတော့။ ဘယျလိုမှ လူကောငျး မဖွဈနိုငျ လို့ပါ။
(၁) အပိုတှေ လုပျပွနျပွီ
ယောကျြား တယောကျ၊ ခဈြသူ တဈယောကျ အနနေဲ့သငျ့ရဲ့ ခံစားခကျြကို ဒီလို မစျောကားသငျ့ ပါဘူး။ သငျဟာ ရကျတှဆေကျပွီး စိတျဖိစီးနတောလညျး ဖွဈကောငျးဖွဈမယျ၊ သူ့ဖကျက ကွညျ့လို့ အသေးအမှားလို့ ထငျရတဲ့ ကိစ်စတှတေောငျ သငျ့အနနေဲ့ကွညျ့ရငျ အရမျးပငျပနျးကောငျး ပငျပနျးနမေယျ။
သငျ့ဘာသာသငျ အပိုတှလေုပျနတောပဲ ဖွဈဖွဈ၊ သငျ့ခဈြသူတဈယောကျ အနနေဲ့သငျ့ကို နှဈသိမျ့ပေးရမှာ သူ့တာဝနျပါ။
ဒီလိုမဟုတျဘဲ အပိုတှလေုပျနပွေနျပွီ ဆိုတဲ့ သဘောမြိုး သကျရောကျတဲ့ စကားကို ပွောတယျ ဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျ ခဈြခဈြ လမျးခှဲလိုကျပါ။ သငျ့အပျေါမှာ နညျးနညျးလေးမှ ညှာတာ၊ သနားစိတျမရှိတဲ့သူကို အခြိနျကုနျခံ ဆကျတှဲ မနသေငျ့ တော့ပါဘူး။
(၂) နငျငါ့ကို တကယျခဈြရငျ
ဒီလိုစကားဟာ အစပိုငျးမှာတော့ ဘာမှမဟုတျဘူး လို့ ထငျရပမေယျ့ သငျ့ကို စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ကနေ နှိပျစကျနတော ဖွဈပါတယျ။ နငျငါ့ကို တကယျခဈြရငျ ငါနဲ့ အိပျပေးရမယျ၊ ဒါဝယျပေး ရမယျ၊ ဒါလုပျပေးရမယျ အစရှိသဖွငျ့ ခဈြတာကို ခုတုံးလုပျပွီး သငျ့ကို ခိုငျးစတေတျတဲ့သူ ဆိုရငျတော့ ဘယျလောကျခဈြခဈြ လမျးခှဲလိုကျပါ။ သငျ့ကို တကယျခဈြတာ မဟုတျသလို၊ သစ်စာရှိမယျ့ သူမြိုးလညျး မဟုတျလို့ပါ။
(၃) ရညျးစားဟောငျးနဲ့ နှိုငျးယှဉျခွငျး
မိနျးကလေးတဈယောကျကို အခွား မိနျးကလေးတဈယောကျနဲ့ နှိုငျးယှဉျတာဟာ လုံးဝ မလုပျသငျ့တဲ့ လုပျရပျ ဖွဈပါတယျ။ ပိုဆိုးတာကတော့ သူ့အရငျ ရညျးစားနဲ့ နှိုငျးယှဉျပွီး ပွောခွငျးပါပဲ။ ဒါဟာ စိတျပိုငျးဆိုငျရာ ညှငျးပနျး နှိပျစကျတတျတဲ့ ယောကျြားဖွဈကွောငျး သကျသပွေနသေလို၊ သငျ့ကို နာကငျြစမေယျမှနျး သိရကျနဲ့ တမငျလုပျတတျတဲ့သူ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီလိုလူမြိုးကို လမျးခှဲ လိုကျတာ အကောငျးဆုံး ပါပဲ။
(၄) မငျးအမနေဲ့ တခြိုးတညျးပဲ
သငျ့မိခငျဟာ သငျ့ကို ဒီအရှယျထိရောကျအောငျ ကြှေးမှေးပွုစုလာ ခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အမမေဟုတျရငျတောငျ သငျ့ကို လူလားမွောကျအောငျ ကြှေးမှေးပွုစုခဲ့ တဲ့သူ တဈယောကျ ယောကျနဲ့ ဒီလိုမြိုး အဆိုးဖကျကနေ နှိုငျးပွီး ပွောတတျတဲ့ ယောကျြားမြိုးဟာ စိတျဓာတျရေးရာ ညံ့ဖငျြးသေးသိမျတဲ့ သူပါ။
သငျ့ရဲ့မိသားစုကို မကွညျဖွူတဲ့ ယောကျြားမြိုးကို ဘယျလောကျ ခဈြခဈြ လမျးခှဲ လိုကျပါ။ သူကွောငျ့ သငျအမွဲ နာကငျြနရေမှာ မို့ပါ။
(၅) ဘာလို့ ဒီလောကျ ဦးနှောကျ မရှိရတာလဲ
သငျဟာ အမှားတှေ ခဏခဏ လုပျမိတတျတယျ ဆိုရငျတောငျမှ သငျခဈြတဲ့သူဆီ ကနေ အရူး၊ ဦးနှောကျ မရှိဘူး၊ အသုံးမကဘြူး ဆိုတဲ့ စကားမြိုး ထှကျမလာသငျ့ ပါဘူး။ သငျအမှားလုပျမိတဲ့ အခါတှမှော သငျ့ကို သိမျငယျသှားအောငျ၊ စိတျကဉျြးကပျြ သှားအောငျ၊ ထူပူသှားအောငျ ပွောဆိုတတျတဲ့ယောကျြားဟာ အောကျတနျးကတြဲ့ ယောကျြားမြိုး ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ကို တနျဖိုးမထားမှနျးလညျး အရမျးသိသာနေ တာကွောငျ့ အဲလိုလူမြိုးကို လမျးခှဲလိုကျတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ မဟုတျရငျ သငျ့တဈဘဝလုံး မကျြနှာငယျနရေမှာ ဖွဈပါတယျ။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း ချစ်ခဲ့ပြီးမှ မေ့ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ အရမ်းခက်ခဲမှန်း ကြုံဖူးတဲ့သူတိုင်း သိကြမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း လောကမှာ လိုချင်တိုင်းလည်း မရခဲ့တဲ့အချိန်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက်ထိပဲ ချစ်ခဲ့ချစ်ခဲ့ စွန့်လွှတ်သင့်တဲ့ အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါ စွန့်လွှတ်တတ်ဖို့ကလည်း အရမ်းကိုအရေးကြီးပါတယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ အရမ်းချစ်ခဲ့ဖူးတဲ့သူတစ်ယောက်ကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မဖြစ်မနေ မေ့ပစ်ဖို့လိုလာပြီဆိုရင် ဒီအချက်လေးတွေကို သတိရပြီး လိုက်နာပေးခြင်းဖြင့် မေ့ရတာ ပိုပြီးလွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁) အရာရာတိုင်းမှာ အဆုံးသတ်ဆိုတာရှိတယ် ။ သင်ဟာ လူတစ်ယောက်ကို လက်မလွှတ်ချင်လို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ တတ်နိုင်သမျှ အားထုတ်ခဲ့တယ် ဒါပေမယ့်လည်း အဆုံးမှာ ခွဲခွာဖို့သာ ဖြစ်လာခဲ့ရင် အရမ်းကိုဆို့နင့်ကြေကွဲစရာကောင်းနေမှာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း အရာရာတိုင်းမှာ အဆုံးသတ်ရှိတဲ့အတွက် သင်မျှော်လင့်ထားတာထက် ပိုပြီး စောရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပဲ မှတ်လိုက်ပါ။ …
သင့် ကို တန်ဖိုး ထား၊ မထား ဆိုတာသိနိုင် တဲ့ သင့်လက် တွဲဖော်ရဲ့အပြုအမူများ ချစ် တယ်လို့ပြောတာကတယောက်ယောက်ကိုဂရုစိုက်တယ်ဆိုတာပြောပြဖို့အလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်ပေမယ့်အဲဒီတနည်းပဲရှိတာတော့မဟုတ်ပါဘူး …. ။ ခံစားချက်တွေ ဖော်ပြတာက တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူး …. ။ တချို့ကစကားလုံးတွေသုံးပြီးတချို့ကအပြုအမူနဲ့ပြကြပါတယ် …. ။ သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကသင့်ကိုလုပ်ပြတဲ့အပြုအမူတွေကဒေါသထွက်စရာစိတ်ပျက်စရာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ် …။ BrightSideက သင်ချစ်ရတဲ့လူတွေ လုပ်ပြတဲ့ အပြုအမူတွေက ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတာ ပြောစရာမလိုအောင် သိဖို့ နည်း (၆) နည်းကို ဖော်ပြထားပါတယ် ..။ (1) သင်ပြောတာတွေကို ကိုယ်ပိုင်ဒိုင်ယာရီလို နားထောင်တယ် သင့်ရဲ့ လက်တွဲဖော်ကသင့်ပြောတဲ့ ပျော်စရာကော၊ ဝမ်းနည်းစရာကောကို နားထောင်ပြီး နှစ်သိမ့်ပေးတတ်တယ် ဆိုရင်၊သူတို့က နားထောင်ပေးရုံတင်မဟုတ်ဘဲ သင့်တို့ဆက်ဆံရေးရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုပါ …
Total Users : 395879
Total views : 1428321